Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. खुसी अरुले ल्याइदिने होइन, प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो खुसी आफै खोज्ने हो – Janata Live
खुसीलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ? खुसी आफ्नो चाहनासँग सम्बन्धित हुन्छ । चाहना र खुसी जोडिएको छ । हामी कस्तो हुन चाहन्छौँ भन्ने कुराले हाम्रो खुसी निर्देशित हुन्छ । त्यसकारण खुसी भनेको एक प्रकारको दृष्टिकोण हो । जसले आफूलाई सन्तुष्ट लाग्ने कुराहरु खोज्न अभिप्ररित गर्दछ । खुसी र दृष्टिकोण एकआपसमा जोडिएको छ । दृष्टिकोणले खुसी दिने हो । खुसी एउटा यस्तो दृष्टिकोण हो जसले हामीलाई सन्तुष्ट दिन्छ ।
सी सकारात्मक मात्र हुन्छ कि नकारात्मक पनि हुन्छ रुनकारात्मकको परिभाषा नै एकदमै अचम्मको छ । खुसी सापेक्षित हुन्छ । नकारात्मक कुराले पनि कहिलेकाहीँ खुसी दिन सक्छ । कुनै अवस्थामा नकारात्मक हुँदा पनि खुसी प्राप्त हुन्छ ।
मानसिक र भौतिकभन्दा पनि खुसी मूलतः दृष्टिकोण हो । त्यो दृष्टिकोण भन्ने बित्तिकै मानसिकसँग सम्बन्धित हुन्छ । भौतिक कुराले खासै फरक हुँदैन । यो नितान्त मानसिक हो ।
खुसीभन्दा पनि धेरै दुःखको कारण खोजिरहेका हुनाले हामी दुःखी छौँ । हाम्रो देशमा धेरै राम्रा कुरा छन् । तर ती कुरालाई नदेखेर नराम्रा कुराप्रति मात्र हाम्रो चासोको विषय रह्यो । त्यसले गर्दा हामीले आफै आफ्नो दुःख खोजिरहेका छौँ । कसले के नराम्रो गर्यो भनेर खोज्दै हिँड्ने हाम्रो बानी छ । त्यो भनेको दुःखको स्रोत हो । त्यसले गर्दा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेशभन्दा पनि नकारात्मक कुरा खोजेको कारणले हामी दुःखी भएका हौँ । स्वभावले हामी एकदम खुसी हुन जान्ने मानिस हौं ।
नेपाली समाज जे छ, त्यो पारिवारिक संरचनामा छ । नातासम्बन्धलाई महत्त्व दिने संस्कृति छ हाम्रो । आफ्नो वंश र नातासम्बन्धमा असफलता हुँदा पनि हामी खुसी हुन सक्छौँ । एक अर्काको संस्कृतिलाई एकदमै सह्राउने खालको छ हाम्रो संस्कृति । हाम्रो बस्ती विविधतायुक्त छ । अरुको घरमा खुसी हुँदा पनि खुसी हुन जान्ने संस्कृति हो । त्यसकारण नेपालमात्र एउटा यस्तो समाज हो, जहाँ खुसीहरु जोडिएका छन् । कसैको घरमा दुःख पर्यो भने आफ्नै घरमा भएको जस्तो गर्छन् र ठान्छन् नेपालीहरु । संसारमा धेरै खुसी हुने कारण कुनै जातीमा छ भने त्यो नेपाली जातीमा छ । कतिपय देशमा खुसी हुनको लागि ठूलो उपलब्धि चाहिन्छ । हामी नेपालीहरु सानो सानो उपलब्धिमा पनि एकदमै खुसी भइरहेका हुन्छौँ । त्यसकारण हामीसँग खुसी हुने कारण धेरै छन् । एकपटक सबै नेपालीले दृष्टिकोण मात्र परिवर्तन गर्यौ भने हामीभन्दा यो धर्तीमा सुखी अरु कोही छैन ।
अभ्यासमा हामीले सफलताबाट सिकिरहेका हुन्छौँ तर हामीले भन्दा ‘असफलता नै सफलताको जननी हो’ भन्छौं । त्यो भनाइले असफलता हुने मानिसलाई बारम्बार छुट दिइरहेको छ । त्यसकारण हामी असफल भए पनि हामी क्षमा दिने हाम्रो संस्कार रहेको छ । कुनै बच्चाहरुले थोरै नम्बर ल्याए भने पनि हामीले उसले किन धेरै ल्याउन सकेनौँ खोज्दैनौँ कि किन थोरै ल्यायो भनेर खोज्न थाल्छौँ । असफलतातिर हामी केन्द्रित हुन्छौँ ।
हामीभित्र दुई प्रकारको दिमाग छ । अर्धचेतन दिमाग र चेतनशील दिमाग । चेतनशील दिमागले प्रत्यक्ष कुराहरु देख्छ । त्यसले सही र गलत छुट्याँउछ । अर्धचेतन दिमागले सही र गलत छुट्याउँदैन । उसको लागि सही र गलत एउटै कुरा हुन्छ । गरिब भनेपछि उसले गरिबको चित्र आफ्नो दिमागमा राख्छ । मान्छेलाई गरिब हुनुका कारण खोज्न अभिप्रेरित गर्दछ । किनभने हामीभित्र दुई प्रकारको दिमाग छ । अर्धचेतन दिमाग र चेतनशील दिमाग । चेतनशील दिमागले प्रत्यक्ष कुराहरु देख्छ । त्यसले सही र गलत छुट्याँउछ । अर्धचेतन दिमागले सही र गलत छुट्याउँदैन । उसको लागि सही र गलत एउटै कुरा हुन्छ । गरिब भनेपछि उसले गरिबको चित्र आफ्नो दिमागमा राख्छ । मान्छेलाई गरिब हुनुका कारण खोज्न अभिप्रेरित गर्दछ । अर्धचेतन दिमागले चेतन दिमागलाई त्यस्तो निर्देशन दिन्छ । त्यसले गर्दा थाहा नपाई आम मानिस गरिबीमा अभ्यस्त भएका हुन्छन् ।समृद्धि के हो भनेर हामीले छलफलमा ल्यायौं भने समृद्धि कस्तो हुन्छ भनेर हामीले त्यतातिर ध्यान केन्द्रित गर्छौँ । त्यसकारण मनोविज्ञानका कुराहरु पनि छन् ।
कुनै पनि अवस्थामा केही कुरा चलायमान छन् भने त्यहाँ दुई कुरा विद्यमान हुन्छन्स् सकारात्मक तत्त्व र नकारात्मक तत्व । हामीले सकारात्मक त्तत्व के हो भनेर खोज्न थाल्यौँ भने हामी खुसी हुन्छौँ । हामी सकारात्मक पनि हुन्छौं । त्यही अवस्थामा के नकारात्मक छ भनेर खोज्यौं भने हामी नकारात्मक हुन्छौँ ।
हामीले जुन कुरामा बढी ध्यान केन्द्रीत गर्छौँ, त्यही हुन्छ । हामी नकरात्मकमा फोकस गरेर सकारात्मक बढाउन चाहन्छौँ । त्यो विज्ञानसम्मत हुँदैन । त्यसकारण हाम्रो देशमा नकारात्मकता बढिरहेको छ ।
खुसी हुने सूत्रहरु के-के होलान् ?
नेपाली समाजको एउटा समस्या के हो भने आफूलाई पनि सम्मान नगर्ने र अरुलाई पनि सम्मान नगर्ने । प्रत्येक व्यक्तिले के ठान्नुपर्यो भने प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि घाम लाग्छ, सामान्य नागरिकलाई पनि घाम लाग्छ । दुवैलाई भोक लाग्छ । त्यसकारण कुनै पनि नागरिक कुनै पनि हालतमा देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जत्तिकै सम्मानित हुन्छन् ।
पहिलो सूत्र के राम्रो छ भनेर हेर्न जान्नुपर्यौ । मान्छे भावनामा चल्ने खालको हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो भावनालाई ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । आफ्नो भावनालाई सबैभन्दा पहिले सम्मान गर्नुपर्छ । त्यो भनेको आत्मसम्मान हो । त्यसपछि बल्ल हामी अरुलाई सम्मान गर्न सक्छौँ । नेपाली समाजको एउटा समस्या के हो भने आफूलाई पनि सम्मान नगर्ने र अरुलाई पनि सम्मान नगर्ने । प्रत्येक व्यक्तिले के ठान्नुपर्यो भने प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जत्तिकै महत्वपूर्ण हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीलाई पनि घाम लाग्छ, सामान्य नागरिकलाई पनि घाम लाग्छ । दुवैलाई भोक लाग्छ । त्यसकारण कुनै पनि नागरिक कुनै पनि हालतमा देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जत्तिकै सम्मानित हुन्छन् । उहाँको पनि एक भोट हो, सामान्य नागरिकको पनि एक भोट हो । त्यसकारण हरेक नागरिकले आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर हेर्नुपर्यो । म यो देशको सम्मानित नागरिक हुँ । यदि सबैले सबैको सम्मान गर्न सक्यौं भने त्यो व्यक्तिले गैरकानूनी काम गर्दा दश पटक सोच्छ । के सम्मानित नागरिकले यस्तो काम गर्छ ? आफैले आफैलाई प्रश्न गर्न थाल्छ ।